IBC 2019 ၌တစ်ခုတည်းသောမျိုးစုံ၊ All-IP OB ကုန်တင်ကားများပြသမည့် Megahertz NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Megahertz တစ်ခုမှာ-of-a-မျိုး, IBC 2019 မှာအားလုံး-IP ကို ​​OB Truck ကားခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
Megahertz ကတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အပ် Spiritland ရဲ့အသစ် 18-တစ်တန်ကိုဇိမ်ခံ OB ထရပ်ကား System Integration ရဲ့ IBC ရပ်တည်ချက်အပေါ်အလယ်ဗဟိုအဆင့်ကိုယူပါလိမ့်မယ်
လန်ဒန်, ဗြိတိန်, 19 ဇူလိုင်လ, 2019: Megahertz, Ltd, fixed နှင့်မိုဘိုင်း application များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော, စိတ်ကူးယဉ်ဒီဇိုင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပို့ဆောင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူစနစ်များကိုပေါင်းစပ်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမိတ်ဖက်ပြင်ပ Spiritland Productions '' One-Of-a-မျိုး, ကြီးမားတဲ့ပုံစံ, စွယ်စုံအသံနဲ့ဗီဒီယိုကပြပါလိမ့်မည် ယင်း၏ IBC မှာထုတ်လွှင့် (OB) ထရပ်ကား, 12-20 စက်တင်ဘာလအကြား, 13 (ချင်းရိုင်, အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်) 17.F2019 ရပ်တယ်။
SPECTRA အထူးကုအင်ဂျင်နီယာ, Ltd. နေဖြင့်ကိုင်တွယ် coachbuilding နဲ့ 8.5m box ကို-ခန္ဓာကိုယ် Mercedes-Benz Antos တင်းကျပ်ကိုယ်ထည်အပေါ်အခြေခံပြီး, Spiritland Productions '' bespoke ထရပ်ကားအဆုံးသတ်-to-end သည် IP အခြေခံအဆောက်အဦများပါရှိသည်။ audio ဒီသတ်မှတ်ချက်နှင့်အရွယ်အစားအနေနဲ့ OB အဘို့အမှန်တကယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းဖြစ်သောတစ်ဦး Dante ကွန်ယက်ပေါ်တွင်လုံးဝပြေး။ အဆိုပါထရပ်ကားနိုင်စွမ်း Dolby Atmos နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှစောင့်ကြည့်မှုများကိုတိုက်ရိုက်ဂီတများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရောနှောနိုင်ရန်အတွက် Dolby နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
'' Spiritland တစ်ခုမှာ '' အမည်ရှိ Megahertz-built ဇိမ်ခံမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုမော်တော်ယာဉ်, BBC4 အပေါ်တိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်များ၏တစ်ပါတ်ကိုဖုံးအုပ်ထား, ဇွန်လအစောပိုင်း၌အထုတ်လွှင့်အသံအထူးကုမှအပ်လျက်, အောင်မြင်သောစမ်းသပ်ရုံတစျခုတပတ်အောက်ပါလမ်းပေါ်လေ၏ ကမ္ဘာ့ပြိုင်ပွဲ၏ဂုဏ်သတင်းကားဒစ်ဖ်အဆိုတော်အဘို့ဘီဘီစီ Radio3 နှင့်ဘီဘီစီရေဒီယိုဝေလနယ်။ ထိုအရပ်မှကအကြီးစားဘီဘီစီ Radio2 ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် post ကိုထုတ်လုပ်မှုရောနှောစက်ရုံအဖြစ်သုံးစွဲဖို့ထားခဲ့ပါတယ်လျက်, အရေးအသား၏ထိုအချိန်က, ကလက်ရှိစံချိန်နှင့် Hammersmith Apollo မှာ Burt Bacharach အထူးဖျော်ဖြေပွဲ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရောနှောများအတွက်အသုံးပြုနေပါသည်။
ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်သူအပေါ်အကြံပြုချက်များနှင့်လမ်းညွှန်မှုမှကြွလာသောအခါ "ဘာကျနော်တို့အများဆုံး Megahertz အတူလုပ်ကိုင်အကြောင်းကိုပျော်မွေ့သူတို့၏တိကျစွာနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအသေးစိတျဖို့အဖြစ်အသိပညာနှင့်မြင်သာသူတို့ရဲ့အဆင့်ပါ။ သူတို့ကအမှန်တကယ်ငါတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအများဆုံးစေလို "ဂါရတ် Iles, Spiritland Productions ပူးတွဲတည်ထောင်သူဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "တစ်ဦးအဆုံးမှအဆုံးသို့အိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ထရပ်ကားထားရှိခြင်းသည်ကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပမာဏကိုလျှော့ချ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်မှာငါတို့ energies ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုသည့်နေရာမှာကယ်တင်ခြင်းသို့အချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌မသာ, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိရောက်ဖြစ်ပါသည် ပိုကောင်းတဲ့အသံထုတ်ကုန်ကိုဖန်ဆင်း၏။ "
ကြီးမားသော OB ၏အသင်းရဲ့ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံအပေါ် drawing တစ်ခု SSL ကိုစနစ် T ကအပါအဝင်ကုန်တင်ကားများအတွက်အကွာအဝေးပစ္စည်း Spiritland Productions မေတ္တာရပ်ခံထိပ်, အသံထုတ်လုပ်မှုစားပွဲခုံနှင့် console ကို, ဘိနပ်မပါသောပီနှင့်နျူမန်မော်နီတာ၏ KH အကွာအဝေးထုတ်လွှင့်။ အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်စံ, Dante နဲ့ Riedel Bolero နှစ်ဦးစလုံးဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကို run သောတစ်ဦး Optocore ဇာတ်စင်သည့်စနစ်အဖြစ် သာ. ကြီးမြတ််အဘို့ဖြောင့်ထုတ်ကုန်များသို့ပလပ်နိုင်ရှစ်ဇာတ်စင် MADIs အဖြစ် 128 SSL ကိုမိုက်ကရိုဖုန်း AMPS သယ်ဆောင်။
"ကျနော်တို့နှင့်အတူဆော့ကစားရန် 18 တန်ချိန်ခဲ့ရပြီးထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ audio က OB ထရပ်ကားအဘို့, အလေးချိန်၏အများစုအသံအထောက်အထားမှအချိုးကျသည်။ ကျနော်တို့ရိုးရာနည်းပညာများနှင့်အတူဤအောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြလျှင်, အဆောက်အဦ 50% ပိုမိုကုန်ကျကြလိမ့်မယ်, ကျနော်တို့အများကြီးပိုအာကာသလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အိုင်ပီ-based နည်းပညာဂိမ်း changer သည်နှင့် Megahertz နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ရှေးခယျြရာတှငျ, ကျနော်တို့ထရပ်ကားနှစ်ဦးစလုံးယခုနှင့်အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်နည်းပညာနှင့် Ergonomics လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ "
Unsurprisingly Spiritland Productions, သူတို့ရဲ့လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများသည်အတိုင်း, All-IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်ထရပ်ကားအတွင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်လုပ်ရာထူးအပါအဝင်ပစ္စည်းကိရိယာများရွေးချယ်ရေးနှင့်အဆင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အကျဉ်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ သို့သျောလညျး, Megahertz ရဲ့အတိုင်ပင်ခံနှင့်ပြည့်ဝ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးဒီဇိုင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတညျဆောကျ, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှစ်ဖက်စလုံးများအတွက်ထူးချွန် output ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
"ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ, ပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်လုပ်ကိုင်, ယာဉ်ရဲ့ Ergonomics အကြောင်းကိုဘက်စုံအစိမ်းရောင်အထောက်အထားများစဉ်းစားသည်အဘယ်မှာရှိစီမံကိန်းများအဲဒီအမျိုးအစားများ, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စတိုင်, ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ spec ၏ထိပ်ပေါ်မှာအလွန်မကြာခဏန်းကျင်မလာကြဘူး," Jon Flay ကလည်း, မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ, Megahertz ။ "ကျနော်တို့က Spiritland Productions နှင့်အတူဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်သော့ချက်မိတ်ဖက်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ "
Spiritland Productions အမွေအနှစ်ဗဟိုလန်ဒန်မြို့ရှိနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား Spiritland အသံဖမ်းစတူဒီယိုထဲကနေခိုင်မြဲစွာ set နှင့်တကွ, ထရပ်ကား၏ဗေဒဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။
Spiritland Productions ဂရုတစိုက် spec ရန်, Megahertz နှင့် coachbuilder, SPECTRA အထူးကုအင်ဂျင်နီယာ, Ltd. နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ထရပ်ကားသို့အရည်အသွေးမြင့်ပရိဘောဂနှင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ install, ထို output ကိုသေချာနှစ်ဦးစလုံးယခုစက်ရုံသုံးပြီးဧည့်သည်များ၏မြင့် caliber ၏မြော်လင့်ခြင်းနှင့်အကွာအဝေးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အနာဂတ်မှာ။ အခါလိုအပ်သောဗီဒီယိုကိုရောစပ်ထည့်သွင်းဖို့စွမ်းရည်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ - အတွင်းပိုင်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့, layout ကိုအများကြီးပိုစွယ်စုံ၎င်း၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်အာကာသအောင်, ဧည့်သည် seating ဧရိယာထဲမှာတစ်ဖြုတ်ဆိုဖာနှင့်စားပွဲပေါ်မှာထည့်သွင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Spiritland Productions ပြီးသားတစ်ဦးထုပ်ပိုး 2019 ရှိသည်, လမ်းအပေါ်၎င်း၏ပထမဆုံးတစ်နှစ်အတွက် All-IP ကို ​​OB ထရပ်ကားတိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုအဖြစ်အဓိကအားကစားဧညျ့နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဗြိတိန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသော-ပရိုဖိုင်းကိုပွဲတော်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအချို့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်မျှော်လင့်နေသည် ဥရောပတိုက်တွင်ဖြစ်ရပ်များ။
ယင်း၏အပြည့်အဝဘုန်းအသရေအတွက် Spiritland တစ်ခုမှာတွေ့ကြုံခံစားရန်, Megahertz ရဲ့ IBC 12.F20 (ချင်းရိုင်, အမ်စတာဒမ် 13-17 စက်တင်ဘာလ) ရပ်သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
1982 ကတည်းကထူးချွန်များအတွက်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူ Megahertz အစိုင်အခဲဘဏ္ဍာရေးကျောထောက်နောက်ခံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အရှည်ဆုံးရပ်တည်မှုသမိုင်းတစ်ဦးနှင့်အတူစနစ်များကိုပေါင်းစပ်အတွက်လွတ်လပ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ထိုကဲ့သို့သောဘီဘီစီ, BT မီဒီယာ & အသံလွှင့်, Globecast အဖြစ်မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကိုဖောက်သည်ထံမှထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနိုင်ရ , RaceTech, Vive တီဗီ, RT ကိုနှင့် e.tv။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.megahertz.co.uk.
Spiritland Productions အကြောင်း
Spiritland Productions ဟာ Spiritland အမှတ်တံဆိပ်ဖို့နောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်ဖြစ်ကြသည်။ ဂါရတ် Iles နှင့်အန်တိုနီကို Shaw Spiritland Productions တို့ကဖွင့်ခေါင်းနှစ်လုံးတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံစီမံကိန်းများအားလုံးအရွယ်အစားကယ်နှုတ်တော်မူရန်အစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ထိုအခါနောက်ဆုံး 10 နှစ်အတွင်းအဓိကနှင့်ဒုတိယအဆင့်ဆင့်အပေါ်ခေါင်းစဉ် slot နှစ်ခုရောစပ်, Glastonbury, စာဖတ်ခြင်းနဲ့ BBC အကြီးမားဆုံး Weekend အပါအဝင်အများအပြားအဓိကဗြိတိန်ပွဲတော်များအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။
အတွေ့အကြုံအနှစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာထုတ်လွှင့်အပြင်ဘက်တွင်အကြီးမားဆုံးရေဒီယိုအချို့အပေါ်လုပ်ဆောင်နေမှုနှင့်အတူ Spiritland Productions ယခုဗာဂျင်းရေဒီယိုဗြိတိန်များအတွက်အဓိကပံ့ပိုးသူဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခရစ်အီဗန်နံနက်စာပြပွဲရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီး On-တည်နေရာစီမံကိန်းများအားလုံးနောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ဖြစ်ကြသည်။
Spiritland Productions လည်းနာမကိုအမှီတို့အားဤသို့သောဘီဘီစီ, Spotify က Facebook, အဖြစ် clients များနှင့်အတူဘုရင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့တိုးတက်နေတဲ့စတူဒီယိုရှိပေမယ့်အနည်းငယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, အရေးယူအတွက် Spiritland တစ်ခုမှာလာကြည့်ဖို့စီမံချက်, ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ဆွေးနွေးရန်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.spiritlandproductions.com သို့မဟုတ်အီးမေးလ် [အီးမေးလျ protected]
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ လုပ္ငန္းသဘာ၀တူညီသူမ်ား၏ အဆုံးမှအဆုံးသို့အိုင်ပီအခြေခံအဆောက်အအုံ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်လုပ်ရာထူး ဂါရတ် Iles IBC 2019 Jon Flay Megahertz MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး OB Truck ကား အဲ့ဒိထဲကမှတစ်ခု အသံလွှင့်အပြင်ဘက်တွင် post ကိုထုတ်လုပ်မှု Spiritland တစ်ခုမှာ Spiritland Productions တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-07-19
နောက်တစ်ခု: Barnfind IBC 12 မှာနောက်ထပ်အနာဂတ်-သက်သေပြချက်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူ၎င်း၏ All-In-One ကို 2.0G-SDI & HDMI 1 Fiber ပို့ဆောင်ရေး BTF41-2019 Frame ကပြရန်မှ